Lioka 7: 36-50,8 - Ny Baiboly
Lioka toko 7, 36-50,8
<8Fa izaho olona manan-dehibe mba mifehy miaramila koa, ka ny anankiray ilazako hoe: Mandehana, dia mandeha; ny anankiray ataoko hoe: Avia, dia avy; ary ny mpanompoko koa hoe: Ataovy izany, dia manao izy.
36Nisy Farisiana anankiray nanasa an'i Jesoa hiara-hihinana aminy, ka niditra tao an-tranon'ilay Farisiana izy, dia nipetraka nihinana. 37Ary indro nisy vehivavy anankiray ratsy fitondran-tena tao an-tanàna nahalala fa nihinana tao an-tranon'ilay Farisiana Jesoa, ka dia nivimbina tavoara alabastra feno diloilo manitra, 38dia nijanona teo ivohony tanilan'ny tongony sady nitomany ka kotsan'ny ranomasony ny tongony, fa nofaohiny tamin'ny volon-dohany sy norohany, ary nohosorany diloilo manitra. 39Nony nahita izany ilay Farisiana nanasa azy, dia nanao anakampo hoe: Raha mpaminany izy dia ho nahalala ny toetran'ity vehivavy mikasika azy, fa hoe mpanota io. 40Ary Jesoa niteny taminy nanao hoe: Ry Simona, misy zavatra holazaiko aminao. Dia hoy izy: Lazao, ry Mpampianatra.
41Nisy olona roa lahy nananan'ny mpampanjana-bola anankiray trosa, ny iray nananany denie diman-jato, ary ny iray dimam-polo. 42Noho izy ireo samy tsy nanan-kaloa, dia nafoiny ny trosa tamin'izy roa lahy. Koa iza amin'ireo no ho tia azy kokoa? 43Ataoko fa ilay namoizany bebe kokoa, hoy Simona namaly azy. Marina ny anao, hoy izy taminy. 44Dia nitodika an-dravehivavy izy ka nanao tamin'i Simona hoe: Hitanao va io vehivavy io? Niditra teto an-tranonao aho, fa hianao tsy nanome rano hanasako tongotra, izy kosa nanondraka ny tongotro tamin'ny ranomasony sy namaoka azy tamin'ny volon-dohany. 45Hianao tsy nanoroka ahy, izy kosa tsy nitsahatra nanoroka ny tongotro hatrizay nidirako. 46Hianao tsy nanosotra diloilo ny lohako, izy kosa nanosotra diloilo manitra ny tongotro. 47Noho izany dia lazaiko aminao fa voavela ny heloka be nataony satria be fitiavana izy; fa izay amelana kely no kely fitiavana. 48Dia hoy izy tamin-dravehivavy: Voavela ny helokao. 49Ary izay niara-nihinana taminy nanao anakampo hoe: Iza moa ity no mamela heloka? 50Fa hoy izy tamin-dravehivavy: Ny finoanao no nahavonjy anao, mandehana amim-piadanana. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.4487 seconds